Goethe University Frankfurt - Study in Germany, Europe
gaabinta : Mutual
aasaasay : 1914
Ardayda (qiyaastii.) : 46000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Goethe University Frankfurt
Qor at Goethe University Frankfurt
Goethe University Frankfurt, ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya cilmi heerka caalami ee u taagan, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo barnaamijyo waxbarasho, koox kala duwan ee machadyada cilmi, oo diiradda la on habab maadooyinka in xalinta dhibaatooyinka adag. Jaamacadda waxaa loo magacaabay ka dib markii Johann Wolfgang von Goethe, polymath ee Frankfurt-dhashay caanka ah ee uu ku darsaday gaar ah in suugaanta, sayniska, iyo falsafada.
aasaasay sannadkii 1914 la maalgelinta gaarka ah iyo u waxyoonay by dhaxalka Nuurin Yurub, University Goethe taagan sida hormuudka "jaamacadda muwaadiniinta '" a kolba taariikhda jaamacadda waa mid ka mid ah furfurnaan iyo ka qaybgalka dadweynaha.
maanta, University Goethe waa mid ka mid ah jaamacadaha kaliya ee Germany in jecel yahay maalgelinta dawladda la taaban karo ka garab madaxbannaani maamul iyo awood u leh inay abuuraan hibeynta gaar ah.
Sida jaamacad la hibeynta ah, model maalgelinta dhif ah in nidaamka tacliinta sare ee Germany, GU jecel yahay xoriyadda badan ka gacanta dawladda marka ay timaado faahfaahinta sida jaamacad casriga ah waa in la ordi, oo ay ku jirto magacaabidda ee Professor. hibeynta ah in la dhisay waa la si gaar ah maal doonaa kor u qaadida jawi heer sare ah, taas oo si cilmi, waxbarasho, qabaa, iyo in la abuuro.
Ku taalla magaalada ugu magalo iyo kuwa caalamiga ah ee Germany, jaamacadda jiidata jirka kala duwan ee ardayda iyo cilmi-ka adduunka oo dhan. Ardayda lacagta Goethe ka baranayay oo ku nool Frankfurt, Xarunta ugu weyn ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Europe-leh fursado badan oo ay wax ku bartaan iyo dhaqanka hadlayay Jarmal. maanta, Frankfurt waa ratedamong hogaanka 10 ugu magaalooyinka lagu noolaan karo dunida oo dhan (sida Consulting Resource Human toMercer).
Tirokoobyada Key at Goethe University Frankfurt
Wadar ah 46,547 ardayda ayaa ka diiwaangashan University Goethe bilawga simistarka jiilaalka 2014/2015. Kuwaas oo kala ah, 9,453 ahaayeen arday simistarka koowaad iyo 7,302 ahaayeen ardayda caalamiga ahka qiyaastii 125 dal oo kala duwan.
Jaamacadda waxaa lagu abaal qiyaastii 182 million euros maalgelin dibadeed, ay ka mid yihiin maalgelin hoos gobolka Ololaha Hesse Horumarinta ee Excellence Sayniska iyo Dhaqaalaha (LOEWE).
Iyadoo 511 deeq Germany iyo guud ahaan 919,800 euros in deeqaha la taageero, jaamacadda mar kale kaalinta ugu sareysa ka mid ah jaamacadaha dalka Jarmalka in this category.
Guud ahaan, University Goethe ayaa ku farxay in ay helaan rikoor 71 million euros in deeqaha in ay sannad centenary.
Psychology iyo Sciences Sports
Kuliyada Luuqadaha, dhaqammada, iyo Arts
Geosciences iyo Juqraafiga
Sayniska Kombiyuutarka iyo Xisaabta
Kiimikada noole, Chemistry iyo Farmashiyaha
University Goethe la aasaasay 1914 sida jaamacad "muwaadiniinta u gaarka ah","Maalgeliya muwaadiniinta hodanka ah ee Frankfurt, Germany. magacaabay in 1932 ka dib markii mid ka mid ah barbariyiintiina ugu caansan ee magaalada, Johann Wolfgang von Goethe, maanta jaamacadda ka badan 38,000 ardayda. Raadinta at jadwalka taariikhda University Goethe ee, waxaa cad in tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa soo saaray isbedel la taaban karo ee jaamacad-iyo in ay jirto a dardar weeraryahanka cad.
Marka loo arkaa hay'ad deeqsi ah ama bidix-tiirsan, University Goethe waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee loo yaqaan dhashay ee Dugsiga Frankfurt saameynta, qayb ka mid ah Institute for Research-kaas Bulshada qaar ka mid ah aqoon yahanno keenta 20thcentury ee Europe ee Doorashooyinka gollayaasha degaanka (lugu daro, tusaale ahaan, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Hans-Georg Gadamer, Martin Buber, iyo Paul Tillich).
Sababtoo ah xiisado jinsiyadda iyo siyaasadda inta lagu jiro xilligii Nazi, meel u dhow mid ka mid ah saddex-meelood meel ka mid ah shaqaalaha waxbarashada ee jaamacadda ayaa meesha ka saaray inta lagu guda jiro this muddo-badan jaamacad kale German kasta. University Goethe sidoo kale door weyn ka arday dibad ee 1968 taas oo horseeday in dib u habaynta waxbarashada baahsan ee Germany iyo guud ahaan Yurub.
University Goethe ayaa la hayo ay sumcad ee cilmiga bulshada
Sanadihii ugu dambeeyey, University Goethe ayaa la hayo ay sumcad ee cilmiga bulshada, laakiin intaa ku daray goobaha cusub oo muhiim ah oo machadyada cilmi-baarista ee cilmiga dabiiciga ah iyo sidoo kale sharciga, taariikhda, luqadood, aadanaha, farshaxanka, iyo dhaqaalaha. Its "rucubood oo heer sare ah", xarumaha cilmi-baarista maadooyinka, ayaa ka caawiyay in ay soo afaysto profile tacliimeed ee jaamacadda, gaadho natiijooyin fiican meelaha kala duwan laga bilaabo cilmiga dabiiciga ah ("Macromolecular kaxeynayo") daawo ("Wadnaha iyo Pulmonray System", kooxdu waxaa ka mid ah heer sare ah iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Giessen oo ku Max-Planck-Institute for Heart iyo Sambabka Research in Bad Nauheim, taas ayaaba jarida cilmi ku laayeen for therapy novel cudurada wadnaha iyo sambabada) iyo culuumta iyo cilmiga bulshada ("Asaaska Amarada caadi").
Srongly ka go'an inay taageerto cilmi dhalinyaro ah
University Goethe waxaa si xoog leh ka go'an inay taageerto cilmi yar yar iyadoo la siinayo fursado fiican si ay u helaan shahaado phD. At jaamacadaha badan, cilmi u leeyihiin in ay ka dhexeeya dakhliga PhD ah jidka "dhaqameed" ee Germany dooran, ama qayb ka mid ah barnaamij "habaysan" PhD. At University Goethe, dhammaan musharaxiinta phD xaq u leedahay inaad codsato in ay xubno ka Goethe Graduate Academy noqon (GRADE) iyo helitaanka gaar ah tababarka iyo isku xirka fursadaha in ay yihiin astaanta barnaamijyo dheeraad ah oo habaysan.
Ugu dambeyntii, waa mid ka mid xuso hami "taangiyada tahay" ee jaamacadda: Frankfurt Institute cusub ee la aasaasay ee Daraasaadka Sare (FIAS) iyo Machadka Daraasaadka Sare ee Humanities ah, oo isu arka sida shaybaarka ah aqoonta cusub ee bulshada.
Jaamacada ayaa sidoo kale ahaa horseed ee "Hab-Bologna" in ka caawiyay in ay yareeyaan dhaqdhaqaaqa arday oo ka mid ah in ka badan 40 dalalka Yurub by jaangoyn lahaa dhismayaasha degree. Laga bilaabo 2005, University Goethe bilaabay bixiya barnaamijyada sayidkiisa ugu horeysay oo ku biiray ka German dhaqankashahaadada ama Magister si bachelor iyo nidaamka sayidkiisa noqon doono complete in simistarka jiilaalka 2011/12. maanta, University Goethe bixisaa koorsooyin shaqsi badan iyo barnaamijyo degree in English, wareeg kale oo waaweyn. Afar barnaamijyada sayidkiisa ee dhaqaalaha waxaa la baraa oo gebi ahaanba in English, mid kale waa laba luqoodlayaasha ah (Jarmalka iyo Ingiriiska) barnaamij. sidoo kale barnaamijyada sayidkiisa badan oo ay ku cilmiga dabiiciga ah loo baran karaa iyada oo aan aqoon ballaadhan oo afka Jarmal, iyo cilmiga phD ee kala duwan ee beeraha ayaa sidoo kale inta badan waxa lagu sameyn karaa in English.
Jaamacadda weyn ee First ee Germany si ay u noqdaan jaamacadda aasaas
In 2001, Jaamacadda waxay ahayd jaamacad ugu horeysay ee waaweyn ee Germany si ay u noqdaan jaamacadda aasaas, taasoo la micno ah in gobolka Hessen weli ku siin lahaa dhaqaale ay ku daboolaan inta badan miisaaniyadda sanadlaha ah, laakiin jaamacadda ay awoodi karto in la dhiso hibeynta gaar ah oo wuxuu ku raaxaysan madaxbannaani maamul buuxa oo ku saabsan arrimaha sida ballamaha awood. University Goethe hadda leedahay ururka Qalinjabiyeyaasha xoogan oo uu soo sara kiciyey € 145,5 malaayiin (ballan adag daro xisaabinta) iyo abuuray in ka badan 50 cusub cilmi iyo booqashada professorships-ah dib-u-leeyahay muhiim aqoonsiga jaamacadda ee sida a "jaamacadda muwaadiniinta '".
Dawladdu waxay of Hessen waxaa maal wadar ahaan 1.2 billion € si ay uga caawiyaan la abuuro jawi campus run in Frankfurt saddex goobood oo kala duwan: Westend Campus ee aadamaha iyo cilmiga bulshada, Campus Riedberg waayo cilmiga dabiiciga ah, iyo Campus Niederrad daawo. The Bockenheim weyn ee hore campus, taariikhdee tan iyo wakhtigii asaasiga ah ee jaamacadda, mar dambe ma noqon doonaan in la isticmaalo mar dhismaha cusub waa dhameystiran.
Ma rabtaa wada hadlaan Goethe University Frankfurt ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Goethe University Frankfurt rasmiga ah Facebook
dib u eegista Goethe University Frankfurt
Ku biir si ay ugala hadlaan of Goethe University Frankfurt.